Tube kureba: 6m / 8m
Tube dhayamita: 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
Laser simba: 1000w 1500w 2000w 2500w 3000w 4000w
Laser mabviro: IPG / nLight internet Laser jenareta
Zvinoshanda chubhu mhando: Round chubhu, mativi chubhu, rectangular chubhu, denderedzwa chubhu, D-zvakaumbwa simbi, T-zvakaumbwa simbi, H-zvakaumbwa simbi, gwara simbi, angled simbi, etc.
Zvinoshanda zvinhu: Stainless simbi, carbon simbi, kwakakurudzira simbi, mhangura, aruminiyamu, nendarira, chiwanikwa, etc.
Kunonyanyisa vachizvitakudza uremu: 25kg / m
Tube dhayamita: 20-200mm
Tube kureba: 6000mm
P2060 / P3080 chubhu Laser nokuveza Machine unobereka yepamusoro zvikamu zvakasiyana-siyana zvitarisiko uye hukuru. Nokushandisa kwayo internet Laser nokuveza michina, akawanda pezvakaitwa dzinogona kubatanidzwa kupinda chimwe muchina. Sezvo nzvimbo dzakawanda zvinoda pezvakaitwa akawanda, akadai chetsika Kucheka, kuchera, machine, punching uye achiita zvokutemera, P2060 / P3080 chubhu internet Laser nokuveza muchina anogona kuita zvose azvaiitwa mumwe chete muchina.
The Laser chubhu nokuveza Machine iri nepokuongorora Chinyorwa loader kuti panoratidza chubhu kuna opareta uyo ngaibve woisa chubhu kupinda muchina uye manually sungisa yacho Collet. Kusanganisa pezvakaitwa zvose izvi munzvimbo imwe muchina anoponesa nguva uye mutengo kana processing zvibereko guru batch kunyange michina pakawanda anobvumira inodzidzisa kuti zviri nyore kuti prototypes kana chiduku batch mangé kugadzirwa.
Ichi chubhu Laser aricheke uyewo utilizes kumhanya servos kukurumidza zvinonyatsochengeta Positioning izvo zvinoderedza nguva asiri ukoshi yakawedzerwa kufamba. Izvi High nokukurumidza servos pavanoparidza simba internet Laser anogona kuderera chikamu kucheka nguva uye kuwedzera kugadzirwa kubvumira kuti yepamusoro kudzoka musi mari nokuda kuguma user.
Ichi Laser chubhu aricheke zvakare akashongedzerwa ane zvizere yakakomberedzwa inonzi opareta yakachengeteka apo muchina rinoshanda.
Golden Laser achagovera zvizere basa uye rutsigiro yedu Laser michina , kusanganisira rizere rwemhuri kupembedza kumativi uye kuurongwa nechokwadi vatengi vedu vanogamuchira yokutsiva nhengo nokukurumidza uye zvinobudirira.
Tube Laser nokuveza Machine zvinhu
Chuck uye chinjika kiramba rutsigiro vachisimudza mudziyo kunze zvokudya nguva, nechokwadi concentricity, kudzivirira nyere swinging.
otomatiki kushanda pakuvheneka
Automatic kushanda pakuvheneka chubhu.
Vapiwa Find Center
Wedzerai negoho, iko zvigadzirwa unhu.
Mark mativi uye njanji okurwadzisa.
Fast pakona mhinduro, yekudyidzana nani achicheka kunyatsoshanda.
Kuchinja Speed ​​zvaitika
In ezvinhu kutsanya nokuveza, unogona kubudirira inogona kuenderera okurwadzisa unhu.
Ponesai basa uye kudzivirira workpiece rurege ndikamumara.
Munyika kutungamirira internet Laser resonator uye zvemagetsi zvinoriumba kuitira muchina mukuru pakusimba.
Advanced Collet clamping hurongwa
Chuck centre kuzviremekedza kugadziridzwa, kwaita kuchinja clamping simba maererano Profile nokurondedzerwa kuitira kuti dzakaonda chubhu haisi zvaparadzwa.
Dual vavariro chucks vane kunoenderana siyana senyere hapana chikonzero kutsiva kana kugadzirisa shaya.
Long sitiroko kiramba. Kana nenyere dhayamita iri kutangira mukati 100mm, hapana chikonzero kuchinja kiramba.
Multi-akabatana (zvokudya akabatana, Chuck kutenderera akabatana uye Laser nokuveza musoro) linkage panguva kufamba nokuveza musoro.
Otomatiki yakaungana mudziyo
The zvinoyangarara rutsigiro mudziyo anounganidza Finished pombi kwaita.
The zvinoyangarara kutsigirwa inotongwa servo injini uye zvinogona kuchinja nokutsigira pfungwa maererano nomutopota dhayamita nokukurumidza.
The zvinoyangarara Panel rutsigiro anogona kuchengeta hombe dhayamita mutopota zvakasimba.
Otomatiki Floating Support
Maererano shanduko nenyere mafungiro, kutsigira kukwirira inogona rwoga kuchinjwa nguva chaiyo nechokwadi kuti pasi nenyere anogara vasingasiyani kubva kumusoro rutsigiro mugodhi, iyo inoita basa dynamically kutsigira nenyere.
Welding musono kuongorora
The nomoto musono chinzvimbo nenyere vangazivikanwa kuti nechokwadi kuti nokuveza nzvimbo haambotauri chakanamwa nomoto musono panguva kubudiswa uye kudzivisa dambudziko nenyunje maburi panguva nomoto musono.
Nokuti hwakakungwa uye akaremara mutopota, otomatiki kururamiswa basa munogona kuona segmented unopinza kutsvaka, uye vapiwa gadzirisa kutsaudzira kuwana nepakati pfungwa yacho curved nenyere kuti achicheka kuitira nokuveza zvakarurama.
Kana vachicheka kuti chikamu chokupedzisira chubhu, pamberi Chuck shaya ndivo vanonzi akazarura, uye shure Chuck shaya ichipfuura mberi Chuck kuderedza nzvimbo bofu ari achicheka.
Tube dhayamita asingasviki 100 mm uye wastage zvokuvakisa 50-80 mm
Tube dhayamita anopfuura 100 mm uye wastage zvokuvakisa 180-200 mm
Opsioneel - akabatana rechitatu rokuchenesa yomukati rusvingo mudziyo
Nokuda Laser nokuveza kwacho, kuti gang vaizongoguma vanoomerera chikamu chorusvingo nevakomana mutopota yomukati. Zvikurukuru, pombi vane diameters zviduku achava zvakawanda gang. Nokuti vamwe yakawanda mafomu, wechitatu mugodhi kugamuchira mudziyo inogona kuwedzerwa kudzivirira gang kubva nokuomerera parusvingo rwomukati.
Tube Laser nokuveza muchina Software
PA German kuzvidzora Software
Mumwe peji rinopedzisa zvose akavhiyiwa yakawanda mushandisi-ushamwari!
Nokukurumidza gadzirisa inowanikwa, yamunenge!
Wedzera yakazvimirira chirwere inowanikwa nokukurumidza disposal pamusoro-nzvimbo matambudziko, zvikuru vakangwara!
Lantek Flex3d inotsigira zvakasiyana siyana mutopota mhando
Standard chubhu mhando: Round chubhu, mativi chubhu, Ob-mhando chubhu, D-mhando chubhu, Triangle chubhu, denderedzwa chubhu, etc.
Uye chinokosha serin'i mutopota yakaenzana dhayamita.
Panguva iyoyowo, flex3d ane dzichipfekeka modules kuti Profile nokuveza , izvo zvinogona kutema angled simbi, gwara simbi uye H-zvakaumbwa simbi, etc.
Mhando kushanda kuti Laser nokuveza chubhu
Standard mhando (Pakavharwa mhando)
Round chubhu, mativi chubhu, rectangular chubhu, elliptical chubhu, denderedzwa chubhu, D-mhando chubhu, Triangle chubhu ...
Modular mhando (Non-up mhando)
Channel simbi, U-simbi, angled simbi, T-mhando, H-mhando, lath simbi ...
Laser nokuveza chubhu ivhu
Fiber Laser Pipe / Tube Kucheka Machine Technical Parameter
Pipe urefu 6000mm / 8000mm
Pipe dhayamita 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
Laser mabviro IPG / nLIGHT internet Laser
Dzokorora Positioning kunyatsoita ± 0.03mm
Maximum Positioning havukavu 90m / Maminitsi
Electric simba zvitengeswa AC380V 50 / 60Hz
Golden Laser - internet Laser kucheka Systems DZAKATEVEDZANA
Automatic chiputu loader Tube Laser Cutting Machine
Full Closed Fiber Laser Cutting Machine pamwe nhovo Exchange Table
Dual Rinoshanda Fiber Laser Metal Sheet & Tube Cutting Machine
High nemazvo Linear Motor Fiber Laser Cutting Machine
Furniture, zvokurapa mudziyo, gym midziyo, mafuta ubanguranyika, vanoratidza pasherefu, purazi michini, zambuko, kutumirwa, mamiriro zvikamu, etc.
Tube Laser Kucheka Machine Application Material
Round, mativi, rectangular, denderedzwa, muchiuno kumativi chubhu uye dzimwe pombi zvesimbi.
<< Verenga More pamusoro Tube Laser Cutting Zvandakashanda
Internet Laser nokuveza simbi Ukobvu zvakasiyana Laser masimba
Tapota taura Golden Laser mamwe Specification uye mashoko pamusoro internet Laser okurwadzisa muchina . Your zvinoita mibvunzo inotevera ichatibatsira kutokurudzira kupfuura rakakodzera muchina.
1. Chii mhando nesimbi Unofanira kucheka? Metal jira kana chubhu? Carbon simbi kana Stainless simbi kana aruminiyamu kana kwakakurudzira simbi kana ndarira kana mhangura ...?
2. Kana kutema jira simbi, chii pakukora? Chii vanoshanda saizi hwaunofanira? Kana kutema simbi chubhu kana mutopota, chii rusvingo ukobvu, dhayamita uye kureba nenyere / chubhu?
3. Chii rako rapera chigadzirwa? Chii rako kushanda indasitiri?
4. Zita renyu, zita kambani, email, runhare (WhatsApp) uye Website?
Format Large Fiber Laser Kucheka Machine nokuda Metal Sheet uye Tube
Large nemanyorerwo rakavhurika-mhando internet Laser nokuveza muchina pamwe chubhu okurwadzisa kuda. Sheet nokuveza nzvimbo 2m × 4m, 2m × 6m. Tube urefu 4m, 6m. Tube dhayamita 20mm ~ 200mm Laser simba 1000W ~ 3000W
6000W 8000W Fiber Laser Kucheka Machine
High simba uye guru Manyorerwo internet Laser aricheke. BECKHOFF CNC controller. 2.5m × 6m, 2.5m × 8m okurwadzisa nharaunda. Kunonyanyisa nokuveza ukobvu 30mm CS, 16mm SS
2KW Fiber Laser Kucheka Machine nokuda Metal Sheet
2000W Closed Type Fiber Laser Kucheka Machine pamwe nhovo Changer. Kucheka Area: 1500mm × 3000mm, 1500mm × 6000mm, 2000mm × 4000mm, 2000mm × 6000 ...